1 Samuel 18 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
18 Ɛbae sɛ ɔne Saul kasa wiei ara pɛ, Yonatan+ kra fam Dawid kra ho,+ na Yonatan dɔɔ no sɛ n’ankasa ne kra.+ 2 Ɛnna Saul faa no saa da no, na wamma wansan ankɔ ne papa fie.+ 3 Na Yonatan ne Dawid yɛɛ apam,+ efisɛ ɔdɔɔ no sɛ n’ankasa ne kra.+ 4 Bio nso, Yonatan yii ne nguguso a ɔhyɛ no maa Dawid, ne ne ntade a aka ne ne nkrante ne n’agyan ne n’abɔso. 5 Na Dawid kokɔɔ ɔsa. Baabiara a Saul somaa no no, ɔde nyansa yɛɛ ade,+ enti Saul de no too mmarima akofofo no ano,+ na ɛsɔɔ ɔman no nyinaa ne Saul nkoa nso ani. 6 Sɛ Dawid kokunkum Filistifo na wɔresan aba a, mmea fi Israel nkurow nyinaa mu de nnwom+ ne asaw ba behyia Ɔhene Saul; wɔde mpintin+ ne ahurusi+ ne asankuwa. 7 Ná mmea a wɔredi ahurusi no bɔ gye so sɛ:“Saul akum n’apem,Na Dawid akum ne pedu.”+ 8 Na Saul bo fuwii+ pii, efisɛ asɛm yi anyɛ no abodwo, enti ɔkae sɛ: “Wɔde ɔpedu ama Dawid, na me de, wɔde apem na ama me, nea aka ara ne sɛ wɔde ahenni no bɛma no!”+ 9 Na efi da no rekɔ, Saul nyaa Dawid ho adwemmɔne.+ 10 Ade kyee no,+ Onyankopɔn maa honhom bɔne baa Saul so,+ enti ɔyɛe sɛ odiyifo+ wɔ fie hɔ; ná Dawid de ne nsa rebɔ sanku+ sɛnea ɔyɛ kan nna no, na na peaw kura Saul nsam.+ 11 Na Saul tow peaw+ no, na ɔkae sɛ: “Mɛwɔ Dawid afam dan ho!”+ nanso Dawid dan ne ho fii n’anim mprenu.+ 12 Na Saul suroo+ Dawid efisɛ na Yehowa di n’akyi,+ nso Saul de, na wafi n’akyi.+ 13 Enti Saul yii no fii ne nkyɛn,+ na osii no apem so panyin, na odii ɔman no anim kɔɔ ɔsa daa.+ 14 Dawid kɔɔ so de nyansa yɛɛ ade+ n’akwan nyinaa mu, na Yehowa dii n’akyi.+ 15 Saul hui sɛ ɔde nyansa yɛ ne biribiara,+ na osuroo no. 16 Na Israel ne Yuda nyinaa dɔɔ Dawid, efisɛ ɔno na ɔde wɔn kɔɔ ɔsa. 17 Na Saul ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Hwɛ, me babea panyin Merab+ ni. Ɔno na mede no bɛma wo aware.+ Ɔkokodurufo ara na yɛ ma me, na ko ma Yehowa.”+ Saul de, ɔkae wɔ ne tirim sɛ: “Meremfa me nsa nka no, Filistifo na wɔn nsa bɛka no.”+ 18 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Saul sɛ: “Hena ne me, na me nkurɔfo, me papa abusua yɛ dɛn wɔ Israel na mabɛyɛ ɔhene ase?”+ 19 Nanso bere dui sɛ wɔde Saul babea Merab bɛma Dawid no, na wɔde no ama Meholani+ Adriel+ aware dedaw. 20 Ná Saul babea Mikal+ dɔ Dawid, na bere a wɔka kyerɛɛ Saul no, asɛm no yɛɛ no anigye. 21 Na Saul kae sɛ: “Mede no bɛma no, na ayɛ no afiri,+ na Filistifo de wɔn nsa aka no.” Enti Saul ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Mede mmea yi mu nea ɔto so abien no bɛma wo na woabɛyɛ m’ase nnɛ.” 22 Afei nso Saul hyɛɛ ne nkoa sɛ: “Monkɔka nkyerɛ Dawid kokoam sɛ: ‘Hwɛ! Ɔhene pɛ w’asɛm, na ne nkoa nyinaa dɔ wo. Enti bɛyɛ ɔhene ase.’” 23 Na Saul nkoa kaa nsɛm yi guu Dawid asom, nanso Dawid kae sɛ: “Ɛyɛ ade ketewa mo ani so sɛ mɛyɛ ɔhene ase, me a meyɛ ohiani,+ na wommu me hwee+ yi?” 24 Na Saul nkoa no kɔbɔɔ no amanneɛ sɛ: “Nsɛm yi na Dawid kae.” 25 Ɛnna Saul kae sɛ: “Monkɔka nkyerɛ Dawid sɛ, ‘Ɛnyɛ tiade+ bi na ɔhene pɛ, na mmom onkotwa Filistifo mmarima ɔha dua ano were+ mmra, na ɔmfa nni ɔhene atamfo so were.’”+ Nanso na Saul abɔ ne tirim sɛ ɔnam Filistifo nsa so bɛma Dawid atɔ. 26 Enti ne nkoa no kɔkaa nsɛm yi kyerɛɛ Dawid, na ɛyɛɛ Dawid fɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔhene ase.+ Nna no nnya nnui no, 27 Dawid sɔree, na ɔne ne mmarima no siim kokunkum+ Filistifo ahanu, na Dawid de wɔn dua ano were+ bae, na wɔkan ma ɛsoe de maa ɔhene, na ɔbɛyɛɛ ɔhene ase. Na Saul de ne babea Mikal maa no aware.+ 28 Saul de n’ani too fam hui sɛ Yehowa di Dawid akyi.+ Na Saul babea Mikal nso dɔɔ no.+ 29 Dawid nti Saul suroe pii, na Dawid bɛyɛɛ Saul tamfo daa.+ 30 Ná Filistifo akunini+ fi adi bɛko, na da biara a wɔbɛba no Dawid de nyansa yɛ ade+ sen Saul nkoa nyinaa, na ne din yɛɛ kɛse.+